Imwe nyaya yechirwere chepneumonia yakasimbiswa muSychelles: Zviremera zvinorambidza kupinda kwekubva kuMadagascar
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Imwe nyaya yechirwere chepneumonia yakasimbiswa muSychelles: Zviremera zvinorambidza kupinda kwekubva kuMadagascar
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Madagascar Kuvhuna Nhau • Dhinda Zviziviso • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Bazi rezveKushanya, Civil Aviation, Port neMarine pamwe neSeychelles Tourism Board vazivisa kuti danho ratorwa rekurambidza kupinda kwevafambi vanobva kuMadagascar.
Sarudzo iyi iri mukukumbira kwePublic Health Authority uye inzira yekudzivirira iri kutorwa nekuda kwengozi yakanyanya yekuunza chirwere chemabayo muSychelles, iri parizvino iri kuparadza Madagascar.
Bazi rezvehutano reSeychelles rakasimbisa kuti nyika yakawana chiitiko chayo chekutanga chechirwere chemabayo neChipiri. Murwere murume weSeychellois uyo akadzoka kubva kuMadagascar nendege yeAir Seychelles neChishanu 6 Gumiguru. Kuongororwa nekukurumidza kwakaitwa mushure mekunge murume atanga kukura zviratidzo zvinosanganisira kupisa muviri neMuvhuro, uye miedzo yacho yakazoonekwa kuti yakanaka. Bvunzo dzepamutemo dzekusimbisa dzave kuitwa pasampuli dzeropa dzinotumirwa kunongedzo murabhoritari mhiri kwemakungwa, kunyanya kuPasteur Institute muFrance.
Zviremera zveSeychelles zvakanyatso chenjera kubvira zvakavimbiswa kuti murairidzi weSychellois basketball, akafira muchipatara kuMadagascar mwedzi wapfuura, mushure mekubatwa nechirwere ichi.
Ose ari maviri Ministry Ministry uye Seychelles Tourism Board vanovimba nendege dzese dziri kubhururuka kuenda kuSeychelles kuti dzishande pamwe nekurega kukwira chero vafambi vanouya kuSychelles kubva kuMadagascar kwechinguva. Chero ani mufambi anotsvedza nepakati kana kupfuura neSychelles kubva kuMadagascar achapihwa sarudzo yekudzoka nekukasira, zvikasadaro ivo vanofanirwa kuenda kunzvimbo yekuzvimiririra kwemazuva matanhatu.
Iyo yekuzvimiririra nzvimbo iri kuSeychelles Coast Guard yemauto academy yatove munzvimbo kune vese vanouya vafambi (vashanyi nevagari) vanosvika muSychelles kubva kuMadagascar vachishandisa dzimwe nzira, sezvo nendege yenyika, Air Seychelles yakatokanzura nendege dzakananga kuenda kuMadagascar pamusoro kupera kwevhiki, pakukumbirwa nevakuru vehutano.
Vese veHurumende Ministry uye STB vakadzokorora kuti vese vashanyi parizvino vari kuzororo muSychelles vakasununguka kunakidzwa nezororo ravo uye kuti kurambidzwa kupinda munyika kuri kungonanga vafambi vanopinda Seychelles kubva kuMadagascar.
Seychelles 'zviremera zvehutano zviri kushandawo pamwe nevashanyi vekushanyira kuodza moyo vagari veSychelles kubva kuenda kuMadagascar. Vanhu vanga vaenda kuchitsuwa chakavakidzana cheIndian Ocean mukati memazuva manomwe apfuura vatoiswa pasi pekutariswa uye vari kuteverwa nevakuru vehutano nenzira yakarongeka.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kusvika parizvino chiitiko chimwe chete chechirwere chemabayo chakasimbiswa muSychelles pachayo. Munhu ari mumibvunzo akagamuchirwa ari ega pachipatara cheSeychelles uye ari kupihwa nemishonga inorwisa mabhakitiriya, zvakanyatsoita prophylaxis, uye ari kupindura mushe pakurapa zvinoenderana nevehutano Bazi rezvehutano rakati mhuri yake yepedyo, kusanganisira mumwe wake, mwana wavanogara navo pamwe neshamwari yepedyo, vakagamuchirwa vari vega mushure mekunge vatanga futi kupisa, senzira yekuzvidzivirira. Ivo vari zvakare kupihwa pamwe nekurapwa, sezvo iriyo nzira yekuraira kurapwa kune vanhu vakave nekutanga kuratidzwa kwemutsara nemunhu anozivikanwa ane hutachiona.
Bazi rezvehutano riri kutevera vanhu vangangodaro vakasangana nemunhu ane hutachiona, mushure mekunge zvanzwikwa kuti haana kuteerera mirairo yekuti arambe akatariswa kumba kwake adzoka kubva kuMadagascar uye akapinda musangano. Vachipindura mubvunzo wekukurumidzira mugungano renyika mangwanani ano, Gurukota rezvehutano, Jean Paul Adam, vakasimbisa kuti vanhu ava, kunyanya vadzidzisi, vanga vari pabasa vari pazororo rekurwara kwemazuva matanhatu uye vari kupihwa nemushonga senzira yekudzivirira.
Parizvino zvakave zvichisimbiswa kuti dzinenge zvikoro zviviri zvasarudza kuvhara. Gurukota Adam vakati mumusangano havana kunge paine chikumbiro kubva kuvakuru vehutano chekuvhara zvikoro, asi vangangodaro vakatora danho sezvo vazhinji vevashandi vavo vari pakurapwa vari pazororo rekurwara, sezvavaive pachiitiko chakapindwa munhu ane hutachiona.
Sekureva kwesangano reWorld Health Organisation (WHO), zviratidzo nezviratidzo zvehosha zvinogona kusanganisira kungoerekana kwave nefivha, kutonhorwa, kurwadziwa uye kuputika kwema "lymph node", kana kupfupika kwekukosora nekukosora uko mate kana mamota akasvibiswa neropa. Denda racho rinogona kurapwa pachishandiswa mishonga inorwisa mabhakitiriya kana ikakurumidza kuendeswa uye mishonga inorwisa mabhakitiriya inogona kubatsira kudzivirira hutachiona pakati pevanhu vakambosangana nechirwere ichi.